Q & A site သည် ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာရင်း ပြု ရန်စီစဉ် ထားသည် ကိုသိ သည် - Pandaily
တရုတ် ၏အွန်လိုင်း Q & A ပလက် ဖော င်းသည် ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယအကြိမ် စာရင်းဝင် ရန်စီစဉ် နေပြီး ဒေါ်လာသန်း ၃၀၀ ခန့် မြှင့်တင် ရန်စီစဉ် နေကြောင်း သိသည်။Bloombergဒီ ကိစ္စနဲ့ အကျွမ်းတဝင် ရှိ သူတွေကို ကိုးကားပြီး သောကြာနေ့က သတင်းမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
ကုမၸဏီက အတိုင္ပင္ခံ ေတြနဲ႔ ပူးေပါင္းၿပီး အမ်ားျပည္သူ သိရွိ ႏိုင္ဖို႔ ေဆာင္ရြက္ ေနတာျဖစ္ၿပီး ဒီလ အေစာ ပိုင္းမွာ တင္ျပ ႏိုင္တယ္လို႔ ဒီ ကိစ္စကို အကျွမ်းတဝင် ရှိ သူများက ထုတ်ပြန် မှု ၏အရွယ်အစား နှင့် အချိန် အသေးစိတ် အချက်အလက်များသည် ပဏာမ ဖြစ်ပြီး ပြောင်းလဲ နိုင် သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။
Credit Suisse Group, Goldman Sachs Group Inc နှင့် JPMorgan Chase & Co. တို့ ဦး ဆောင်သော နယူးယောက် IPO တွင်ဒေါ်လာ ၅ ၂၃ သန်း ရရှိခဲ့သည်။
ဟောင်ကောင်တွင် ဒုတိယ စာရ င်း၏ ကောလာဟလ များ ထွက်ပေါ်လာ ပြီးဖြစ်သည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ် ဒီဇင်ဘာ လက Cleansing News မှ ဖော်ပြ ချက်အရ သူသည် မကြာမီ အနာဂတ်တွင် ဟောင်ကောင်တွင် အများပြည်သူ သွား ရန်စီစဉ် ထားပြီး ၂၀ ၂၂ ခုနှစ် ဇန်နဝါရီလတွင် IPO စာရွက်စာတမ်းများကို တင်သွင်းခဲ့သည်။ အဲဒီ နေ့မှာZhihu က ကုမ္ပဏီ အနေဖြင့် အစီအစဉ်ကို မကြား ဖူး ကြောင်း တုံ့ပြန် ခဲ့သည်.
ပြည်ပ စာရင်း များကို တင်းကြပ် စွာ ကြီးကြပ် ခြင်းဖြင့် တရုတ် ကုမ္ပဏီ များစွာသည် အများပြည်သူ သိရှိ ရန် ဟောင်ကောင် သို့ပြန်လာ ခဲ့ကြသည်။ ပြီးခဲ့သည့် ဒီဇင်ဘာ လက ဟောင်ကောင်တွင် ကျောင်း သို့ပြန် လာသည့် စာရင်း ဟု အပြီးသတ် သည့် နောက်ဆုံး ကုမ္ပဏီ မှာဒေါ်လာ ၄၃၆ သန်း ရရှိ ခဲ့သည့် တွစ်တာ ကဲ့သို့သော တရုတ် ၀ က်ဘ်ဆိုက် Weibo ဖြစ်သည်။
ဒါ့အပြင် ကြည့် ပါ:Weibo သည် ကမ္ဘာအနှံ့ တွင် ရှယ်ယာ ၁၁ သန်း ရောင်း ချပြီး ရှယ်ယာ တစ်စု လျှင်ဒေါ်လာ ၄၉. ၇၅ ထက်မပို ပါ